GRUB 2.06 dia efa navotsotra ary misy ny fanohanana ny LUKS2, SBAT ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
GRUB 2.06 dia efa navotsotra ary misy ny fanohanana ny LUKS2, SBAT sy maro hafa.
Darkcrizt | 09/06/2021 10:05 | Nohavaozina amin'ny 09/06/2021 18:27 | fampiharana
Taorian'ny fampandrosoana roa taona ny famoahana ny kinova vaovao vaovao an'ny GNU GRUB 2.06 dia nambara (GRand Unified Bootloader). Ao amin'ity kinova vaovao ity fanatsarana vitsivitsy ary indrindra ny fanitsiana bibikely isan-karazany no aseho Anisan'izany ny fanohanan'ny SBAT izay mamaha ny olana amin'ny fanafoanana ny mari-pankasitrahana, ary koa ny fanitsiana ilaina amin'ny BootHole.
Ho an'ireo izay tsy zatra an'ity manager multi-modular multiplatform boot ity dia tokony ho fantatrao izany GRUB izany Manohana sehatr'asa marobe, ao anatin'izany ny PC mainstream miaraka amin'ny sehatra BIOS, IEEE-1275 (Fitaovana miorina amin'ny PowerPC / Sparc64), rafitra EFI, RISC-V ary MIPS mpifanaraka Loongson 2E fikirakirana fitaovana, rafitra Itanium, ARM, ARM64 ary ARCS (SGI), fitaovana mampiasa fonosana CoreBoot maimaim-poana.
1 GRUB 2.06 Fomba vaovao manan-danja
2 Ahoana ny fametrahana ny kinova Grub amin'ny Linux?
GRUB 2.06 Fomba vaovao manan-danja
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny GRUB 2.06 nanampy fanampiana ho an'ny format encryption disk LUKS2, izay tsy mitovy amin'ny LUKS1 amin'ny rafitra fitantanana fanalahidy notsorina, ny fahaizana mampiasa sehatra lehibe (4096 fa tsy 512, mampihena ny enta-mavesatra mandritra ny famoahana), ny fampiasana mpanondro fizarazarana an'ohatra, ary ny fitaovana enti-miasa ho an'ny metadata miaraka amin'ny fahafaha mamerina azy io avy hatrany kopia raha tsikaritra ny kolikoly.
también nanampy fanohanana ny maody XSM (Xen Security Modules) izay ahafahanao mamaritra famerana sy fahazoan-dàlana fanampiny ho an'ny hypervisor Xen, milina virtoaly ary loharano mifandraika amin'izany.
Ankoatra izany, ny mekanisma fanidiana dia nampiharina, mitovy amin'ny fameperana mitovy amin'ny kernel Linux. Ny sakana dia mety UEFI azo antoka azo antoka lalan-by bypass, ohatra, mandà ny fidirana amin'ny interface ACPI sasany ary ny fisoratana anarana MSR CPU, mametra ny fampiasana DMA ho an'ny fitaovana PCI, manakana ny fanafarana kaody ACPI avy amin'ireo variana EFI, ary tsy mamela ny I / O fanodinkodinana seranana.
Ny iray amin'ireo fanovana misongadina dia ny nanampy fanampiana ny mekanisma SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), izay mamaha ny olana amin'ny fanafoanana ny mari-pankasitrahana izay ampiasain'ny bootloaders ho an'ny UEFI Secure Boot. Ny SBAT dia mitaky fampidirana metadata vaovao, izay sonia nomerika ary azo ampidirina ao anaty lisitr'ireo singa navela na voarara ho an'ny UEFI Secure Boot. Ity metadata ity dia mamela ny fanafoanana hanodinkodina ireo isa kinova amin'ireo singa tsy mila fanarenana ireo lakile hahazoana boot azo antoka ary tsy mamorona sonia vaovao.
Of the fanovana hafa izay miavaka amin'ity kinova GRUB 2.06 vaovao ity:
Nesorina ny fanohanana ireo banga MBR fohy (ny faritra eo anelanelan'ny MBR sy ny fiandohan'ny fizarazarana kapila; ao amin'ny GRUB dia mitahiry ampahany amin'ny bootloader izay tsy mifanaraka amin'ny sehatry ny MBR).
Amin'ny alàlan'ny default, ny os-prober utility dia tsy mandeha, izay mitady partitions boot avy amin'ny rafitra miasa hafa ary manampy azy ireo amin'ny menio boot.
Fantsom-pifamoivoizana nomanin'ny fizarana Linux isan-karazany.
Ny fahalemen'ny BootHole sy BootHole2.
Ny fahafaha-manangona amin'ny alàlan'ny GCC 10 sy Clang 10 dia nampiharina.
Ahoana ny fametrahana ny kinova Grub amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay maniry ny hametraka ny kinova grub vaovao amin'ny rafitr'izy ireo, dia tokony ho fantatr'izy ireo fa amin'izao fotoana izao ny kinova vaovao amin'izao fotoana izao (avy amin'ny fanoratana ny lahatsoratra) tsy misy fonosana voarindra ho an'ny iray amin'ireo fizarana Linux.
Ka ho an'ny fotoana ahafahana mahazo an'ity kinova vaovao ity, ny fomba tokana misy dia ny misintona ny kaody loharano ary manangona azy.
Ny kaody loharano dia azo alaina ao amin'ny rohy manaraka
Ankehitriny mba hanatanterahana ny fanangonana dia tsy maintsy manokatra terminal isika ary ao anatiny no hametrahantsika ny toerantsika eo amin'ilay fampirimana izay ampidirintsika ny kaody loharano ary hanoratantsika ireto baiko manaraka ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GRUB 2.06 dia efa navotsotra ary misy ny fanohanana ny LUKS2, SBAT sy maro hafa.
Kali Linux 2021.2 Tonga miaraka amin'ny Apps Containerized, RPI Support Enhancements, sy maro hafa
Ksnip: Fampiharana Qt miorina amin'ny rindrambaiko Qt maimaim-poana sy miampita ho an'ny pikantsary